Yan Aung: Peekaboo ပို့စ် ပြင်ဆင်ချက်...
Peekaboo ပို့စ်လေးတွေက ပြဿနာ ခဏခဏတက်နေပါတယ်. Ramani က သူ့ Hosting Site နဲ့ အဆင်မပြေလို့ ပြန်ပြောင်းယူနေပါတယ်တဲ့. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Slow Motion Peekaboo ပို့စ်လေးတွေ လောလောဆယ် လုပ်လို့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး.
ပုံမှန် Peekaboo ပို့စ်လုပ်ထားသူများကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ googlepages ပေါ်က ဖိုင်ကို တော်တော်များများ ယူသုံးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်. ဒါ့အပြင် အဲဒီ့ googlepages မှာ EOT ဖိုင်များကိုလည်း ကျွန်တော်က တင်ထားခဲ့တာ ဆိုတော့ Bandwidth မနိုင်တော့ပါဘူး.
The bandwidth limit for this site has been exceeded!
ဆိုတဲ့ msg သာ ပေါ်လာပါတော့တယ်. ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာပါ အလုပ်မလုပ် ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက အဲဒါပါပဲခင်ဗျာ.
ဒါကြောင့် အရင်ဖိုင်အဟောင်းကို စက်ထဲမှာ ပြန်ရှာပြီး နောက်ထပ်တစ်နေရာမှာ ကျွန်တော် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်. အဲဒီ့လင့်ခ်လေးကို ခုပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ. ယူသုံးရုံပါပဲ.
ပုံမှန် Peekaboo Post လုပ်ထားသူများအတွက်
လို့ </head> မပိတ်ခင်နားလေးမှာ ထည့်ပေးခဲ့တာကို သတိရကြမှာပါနော်.
အဲဒါလေးကို ဖြုတ်ပြီး ဒါလေးနဲ့ အစားသွင်းပေးလိုက်ပါ.
ဒီလောက်ပါပဲ ခင်ဗျာ. ပိုပြီးတော့ စိတ်ချလက်ချ သုံးချင်ရင်တော့ http://yanaung.prospect.googlepages.com/myhacko.js ဆိုတာလေးကို Broswer Address ထဲမှာ ထည့်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ. ဖိုင်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီး Save လုပ်မလား မေးပါလိမ့်မယ်. အဲဒီ့ဖိုင်ကို Save လုပ်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ File Hosting Site တစ်ခုခုမှာ တင်ပါ. ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်အတွက် ကိုယ့်ဖာသာပဲ URL ထုတ်ယူလိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် Bandwidth Limit ကျော်မှာတွေ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့.
ပြီးသွားရင်တော့ အဲဒီ့ URL ကို ခုနက script coding လေးထဲမှာ ပြန်အစားသွင်းပေးလိုက်ပါ.
Slow Motion Peekaboo ပို့စ် လုပ်ထားသူများအတွက်
လို့ Slow Peekaboo ပို့စ်လုပ်နည်းလေးရဲ့ အဆင့်(၁) မှာ ရေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်. အဲဒီ့ coding လေးတွေကို ဒီအတိုင်း ပြန်အစားသွင်းပေးလိုက်ပါ
Slow Motion Peekaboo ပို့စ်က အခုအလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး. ၂ ရက် ၃ ရက်လောက် ခဏစောင့်ပေးပါ. ဒါကြောင့် Coding လေးတွေကို ဒီတိုင်းပဲ ခဏထားပေးပြီး အားလုံးကို Fix လုပ်ပြီးတာနဲ့ Ready Made ပြန်ဖြစ်သွားအောင်ပါ. Slow Motion မလုပ်ချင်တော့ဘူး ဆိုသူများကတော့ အပေါ်က coding လေးတွေကို ဒီတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ အစားသွင်းလိုက်ပါ.
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Slow Peekaboo ပို့စ်လုပ်တုန်းက အဆင့်(၂) မှာ ဖြုတ်ထားခဲ့တဲ့ coding လေးကို ပြန်သွင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်. ဒါမှ အလုပ်လုပ်မှာပါ.
အဲဒီ့အနီရောင် စာကြောင်းလေးကို ဖြုတ်ခဲ့တာ မှတ်မိမှာပါ. ခုပြန်ကူးယူပြီး အဲဒီ့နေရာမှာ ပြန်သွင်းပေးလိုက်ပါ.
လောလောဆယ် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာလည်း Slow Peekaboo ပို့စ် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး. ခဏစောင့်ပေးကြပါဦးလို့ ထပ်မံမေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ. ပုံမှန် Peekaboo ပို့စ်ကတော့ အိုကေပါပြီ.
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ ခင်ဗျာ…
တော်ရိုက်တာ တော်ရိုက်တာ အခုပဲ ကျွန်တော့ ပီကာဗူးတွေ အလုပ်မလုပ်လို့ လာပြောမလို့ ဒါဆို ရပြီး လုပ်ကြည့်ဦးမယ် ကျေးဖူး